चितवनमा कृत्रिम गर्भाधान बढ्दो, ५० प्रतिशत सफल : विज्ञ केन्द्र – Chitwan Post
चितवनमा कृत्रिम गर्भाधान बढ्दो, ५० प्रतिशत सफल : विज्ञ केन्द्र
कञ्चनपुरको लालझाडी गाँउपालिकामा रहेको पशु शाखाका प्राविधिक कर्मचारी बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गराउँदै । तस्बिर: राजेन्द्रप्रसाद पनेरु / रासस
भरतपुर । चितवन जिल्लामा पशुहरुमा हुने कृत्रिम गर्भाधान बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । जिल्लाभर २०७५/७६ मा ५४ हजार ४६१ गाई, भैँसी र बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ ।
२०७४/७५ मा ५१ हजार ४५५ गाई, भैँसी र बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४६ हजार ८६८ वटा गाईभैँसीको कृत्रिम गर्भाधान भएको थियो ।
२०७५/७६ मा चितवनका सात स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी कृत्रिम गर्भाधान भरतपुर महानगरपालिकामा भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार भरतपुर महानगरमा २० हजार ७२२ वटा गाई, भैँसी र बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ । महानगरमा १८ हजार ५९८ वटा गाईको मात्र कृत्रिम गर्भाधान भएको छ ।
यस्तै, भरतपुरमा २०७५/७६ मा दुई हजार ९८ वटा भैँसी, २६ वटा बाख्राको समेत कृत्रिम गर्भाधान भएको विज्ञ केन्द्रका अधिकृत डा. रामचन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।
चितवनमा राप्ती नगरपालिका कृत्रिम गर्भाधानमा दोस्रो भएको छ । गाई, भैँसी र बाख्रा गरी १२ हजार २३५ वटा पशुको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ । जसमा ११ हजार ५५५ वटा गाई, ६४९ भैँसी, ३१ वटा बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको राप्ती नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै, खैरहनी नगरपालिका कृत्रिम गर्भाधानमा तेस्रो भएको छ । खैरहनीमा १० हजार १२७ गाई, भैँसी र बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ । आठ हजार दुईवटा गाई, दुई हजार १० भैँसी र दुई सयवटा बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ ।
भरतपुर महानगरपालिकामा भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रका प्राविधिक दीपचन्द्र घिमिरेले कृत्रिम गर्भाधानमा रत्ननगर खैरहनीभन्दा पछि परेको बताए । उनले भने, ‘रत्ननगरमा ६ हजार १९५ वटा गाई, भैँसी र बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ ।’
रत्ननगरमा ५ हजार ५९५ गाई, ४०० भैँसी र २०० बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ ।
यस्तै, माडी नगरपालिकामा एक हजार १८१ वटा गाई, भैँसी र बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ, जसमा एक हजार ४० गाई, १२५ भैँसी र १६ वटा बाख्रा छन् ।
इच्छाकामना गाउँपालिकामा पनि कृत्रिम गर्भाधानको व्यवस्था छ । २०७५/७६ मा इच्छाकामनामा ६९ गाई, १०८ भैँसीको कृत्रिम गर्भाधान भएको छ । इच्छाकामनामा एउटा पनि बाख्राको कृत्रिम गर्भाधान भएको छैन ।
समग्रमा कृत्रिम गर्भाधान ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सफल भएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । विज्ञ केन्द्रका डा. रामचन्द्र आचार्यका अनुसार चितवनमा कृत्रिम गर्भाधान गाईमा ५५ प्रतिशत, भैँसीमा ५२ प्रतिशत र बाख्रामा ३५ प्रतिशत सफल भएको पाइयो ।
पशु प्राविधिकका अनुसार कृत्रिम गर्भाधानबाट कृषकको समय तथा श्रमको बचत भइरहेको छ । प्रजननसम्बन्धी रोगहरु जस्तैः पाठेघर, गर्भाशयलगायतको संक्रमण हुन पाउँदैन । चाहेको जातको सिमेन मगाई बाच्छाबाच्छी चाहेकै जातको उत्पादन गर्न सजिलो हुन्छ । कृत्रिम गर्भाधानमा किसान आकर्षित भइरहेका पशु प्राविधिक दीपचन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।